Home Wararka XOG:Waare Oo ciidamada Dowladda Udiiday inay weerar ku qaadan Al-shabaab
XOG:Waare Oo ciidamada Dowladda Udiiday inay weerar ku qaadan Al-shabaab
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inuu ka hor yimid hawgalo looga sarilahaa Al-shabaab deeganada uu ka aramiyo Maamulkiisa’ oo ay sameyn lahaayen ciidamada dowladda.
Aadan Cabdi Faarax oo kamid ah Xildhibaanadada Baarlamanka maalmulka Hirshabeelle ayaa sheegay in Madaxweyne Waare uu ka hor imaaday hawlgallo qorsheeysan oo ay bilaabi lahaayen ciidamada Mallatariga ee ku sugan Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha dhaxe kaasi oo ka dan ahaa dagaalyahada Al-shabaab oo qeybo badan kaga sugan deeganada Hirshabeelle.
Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax ayaa sidookale xusay in inta uusan xilka Maamulkaasi qaban Waare ay amni aheyd wadad isku xirta Muqdisho iyo Jowhar balse hada ay tahay meesha ugu amniga xun deeganada Hirshabeelle isagoona sheegay in mar walba lagu dilo Mas’uuliyiiin,Askar iyo dadka shacabka ah ee ku safraya.
Xildhibaano katirsan Barallamaanka Hirshabelle ayaa wado abaabulka Mooshin ka dhan ah madaxweyne Waare ,waxeyna ku eedeenayaan inuu ku fashilmay dardar galinta hawlaha Maamulka Hirshabelle looga baahna.
Previous articleMaamulka Putland Oo Sheegay in khilaaf Kala dhaxeeyo wasaaradda Kalluumeysiga
Next articleRW Kheyre: Puntland in ay difaacdo shacabkeda waa xaq, DF waxaa ka go’an in ay garab istaagto!
Ninkii Fududeeyay Qaraxii Fashil-may ee guriceel oo saaxiib lahaa Cali-yare iyo...
Ciidamada Suuriya oo qabsaday qeybo ka mid ah Quuda